10 တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းခရီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းခရီးများ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ပဲရစ်ရှိနာမည်ကျော်လမ်းများ၏ခေါင်မိုးပေါ်၌, သို့မဟုတ်စကော့တလန်ကုန်းမြင့်များသို့မဟုတ် Alps များအလယ်တွင်, ဒါတွေကဥရောပမှာအလိုအပ်ဆုံးအားလပ်ရက်နေရာတွေပါ. ထို့အပြင်, ဤ 10 တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းနေရာများသည်ပထမလေနှင့်သင့်ကစားပွဲကိုအဆင့်သစ်တစ်ခုတက်စေသည်. တစ်ကိုယ်တော် သို့မဟုတ်စုံတွဲများ, ဤအံ့မခန်းသောနေရာများနှင့်သူတို့၏တင်းနစ်ကွင်းများကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်.
1. ကြီးမြတ်တင်းနစ်ကွင်းနှင့်အတူပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံး Destination: Mouratoglou တင်းနစ်အကယ်ဒမီ
French Riviera သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဥရောပတစ်နိုင်ငံတည်းရှိခဲ့တာ. Alpine တောင်မြင်ကွင်းများ, အပြာရောင်ရေကန်များ, သဲသောင်ပြင်များ, Mouratoglou တင်းနစ်ကွင်းမှခြေလှမ်းအနည်းငယ်သာဝေးသည်. Ionian ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်သည်, ခေတ်မီသောတင်းနစ်ကွင်းသည်ဥရောပရှိထိပ်တန်းတင်းနစ်နည်းပြအချို့နှင့်သင်၏ backhand လေ့ကျင့်ရန်အံ့သြဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
Mouratoglou တင်းနစ်အကယ်ဒမီသည်အဆင့်အားလုံးတွင်ကစားသမားအမျိုးအစားအားလုံးကိုကြိုဆိုသည်. Mouratoglou တင်းနစ်ကွင်းများသည်နေ့တိုင်းဖွင့်သည်. သင်ဟိုတယ်တွင်တည်းခိုနေစဉ် & သွားရောက်ရာအရပ်, သင်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီတရားရုံးတင်နိုင်သည်. အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Mouratoglou တင်းနစ်ကွင်းသည်ကမ္ဘာကျော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် Mouratoglou အကယ်ဒမီ ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကစားသမားအချို့ရှိခဲ့ပြီးဒီမှာအပန်းဖြေအနားယူပြီးဟိုတယ်ရဲ့ spa (သို့) ကမ်းခြေကိုဆက်သွားတယ်.
2. တင်းနစ်ကွင်းနှင့်အတူအီတလီ၌အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်ခရီးပန်းတိုင်: San Pietro Di Positano
ဤကြီးမြတ်တင်းနစ်ကွင်းသည် Il San Pietro ဟိုတယ်ဧည့်သည်များအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်. Positano ကြယ် ၅ ပွင့်တင်းနစ်ကွင်းသည်မြေထဲပင်လယ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော Amalfi ကမ်းခြေကိုပေးသည်. San Pietro တင်းနစ်ကွင်းသည် Positano တွင်ရှိသည်, မှတစ်ခုဖြစ်သော 10 Amalfi ကမ်းခြေ၌လည်ပတ်ရန်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများ, ဟုတ်ပါတယ်၊ အီတလီ.
Amalfi သို့ခရီးသွားခြင်းသည်လူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်. ကမ်းခြေ, အဆိုပါ သာယာလှပကျေးရွာများ, ပင်လယ်ဘဝ, အားကစားနှင့်တင်းနစ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင်ဘက်ကွင်းများနှင့်ချီးကျူးထားသောပို့စကတ်မြင်ကွင်းများ, နောက်ထပ်မည်သူမဆိုတောင်းနိုင်သည်? မင်းဂိမ်းကစားတာကိုငြီးငွေ့လာရင်, မင်းကျောက်စရစ်ကမ်းခြေကိုသွားနိုင်တယ်, ဒါမှမဟုတ်သီးသန့်သွားပါ လှေစီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Positano နှင့်အတူ.
3. T ကသူသည်အင်္ဂလန်တွင်အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကွင်းဖြစ်သည်: ခေါင်းကြီးပိုင်း, Cornwall
Rocky coves များ, သဲကမ်းခြေ, အပြာရောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ, စိမ်းလန်းစိုပြည်သောအင်္ဂလိပ်တဲအိမ်များ, Cornwall သည်အင်္ဂလန်၏အထင်ရှားဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အံ့မခန်းကျွန်းဆွယ်သည်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အပန်းဖြေရန်သင့်တော်သည်, ကြီးမြတ်သည် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ, တင်းနစ်သို့မဟုတ်ရေကစားနည်းကဲ့သို့.
Cornwall တွင်, သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်4တင်းနစ်ကွင်းများကကြီးကျယ်သောပွဲစဉ်များကစားကြသည်. ဥပမာ, Penzance တင်းနစ်ကလပ်သည်အဆင့်အားလုံးတွင်လာရောက်ကြည့်ရှုသူနှင့်ကစားသူများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်. သို့သျောလညျး, အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကွင်းသည် Newquay ရှိ Headland Hotel တွင်ဖြစ်သည်. Fistral သဲသောင်ပြင်နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကြည့်ရှုသည်, Headland သည်ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်ပင်လယ်ကမ်းစပ်၌သင်၏အားလပ်ရက်တွင်တက်ကြွစွာနေရန်အလွန်ကောင်းသောပြင်ပပစ္စည်းများနှင့်အတူ.
4. ဆွစ်ဇာလန်ရှိထိပ်တန်းတင်းနစ်အားလပ်ရက်: Gstaad နန်းတော်
ခရီးသွားများစွာသည် Gstaad မြို့ကိုဆောင်းတွင်းအံ့သြဖွယ်ရာတစ်ခုအဖြစ်သိကောင်းသိလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းနွေရာသီရဲ့ဒဏ္ာရီတစ်ခုလိုပါပဲ. အဆိုပါ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း နွေ ဦး ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်, တောင်တက်ရန်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်, စက်ဘီးစီးခြင်း, နှင့်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ. Gstaad သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တက်ကြွသောအားလပ်ရက်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်, ကျယ်ပြန့်သောရှုခင်းများနှင့်သဘာဝ၌လတ်ဆတ်သော alpine လေနှင့်အတူသင်၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, Gstaad သည် Swiss Alps ရှိတင်းနစ်အားလပ်ရက်များအတွက်ထိပ်တန်းနေရာဖြစ်သည်. Gstaad Palace အပန်းဖြေဟိုတယ်ရှိကြယ် ၅ ပွင့်တင်းနစ်ကွင်းများမှ Swiss Open J သို့. Safra Sarasin တင်းနစ်ကွင်း, နှင့် Gstaad ကလပ်အားကစားစင်တာ, ရွေးချယ်မှုကမင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်, Alpine မြင်ကွင်းများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကစားသမားအချို့နှင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုလေ့ကျင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောတရားရုံးတိုင်း၌စောင့်ဆိုင်းနေလိမ့်မည်.
ဂျနီဗာသည် Zermatt မှရထားနှင့်အတူ
တစ်ရထားနှင့်အတူ Zermatt မှ Bern
Lucerne တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Zermatt ရန်
5. ကန်၌တင်းနစ်ကစားပါ ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်
နြေ္ဒ, အစိမ်းနှင့်အပြာ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သဘာဝအလှတရား, ဂျီနီဗာရေကန်သည်မှော်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. နောက်ခံတွင် Alpine ရှုခင်းသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုဆွဲဆောင်သည်, သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ကြီးအတွက်, သို့မဟုတ်နွေ ဦး အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်. ဒီမှာ, Alpine မြက်ခင်းပြင်၌တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကန်အပန်းဖြေခြင်းကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်, တက်ကြွခြင်းသို့မဟုတ်အေးစက်နေခြင်းမှ, တစ်နည်းနည်းဖြင့်, မင်းရွေးချယ်လိုက်တာကမင်းကိုပိုကျန်းမာပြီးအားအင်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်.
Lake Geneva သည်ပြင်ပအပျော်အတွက်စံပြနေရာဖြစ်သည်, ဤနေရာတွင်တင်းနစ်ကွင်းများသည်ကျက်သရေရှိစေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတင်းနစ်ကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်သည်. ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတင်းနစ်ကွင်းများကိုပေးသည်, စနေ၊ တနင်္ဂနွေများသည်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ စုံတွဲများဖြစ်စေပျော်ရွှင်နိုင်သည်’ ဂျီနီဗာမြို့ရှိတင်းနစ်ကလပ်အသင်းများထဲမှတစ်ပွဲဖြစ်သည်. ဤဆွစ်ဇာလန်ကျောက်မျက်သည်အဆင့်တိုင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်တိုင်းအတွက်ကစားသမားများကိုကြိုဆိုသည်.
6. တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းခရီးများ: ပဲရစ်၌တင်းနစ်အားလပ်ရက်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မြို့တော်မှာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားတဲ့တင်းနစ်ကွင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းနည်းနည်းမှမသိခဲ့ဘူး. ဤအကွက်များထဲမှတစ်ခုကို ၁၂ ရပ်ကွက်၌ဝှက်ထားသည်, ပဲရစ်’ ဗဟိုတင်းနစ်အသင်း. ကလပ်ကို Parisian လမ်းဟောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဖွက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဤခေတ်သစ်တင်းနစ်ကွင်းသည်တင်းနစ်ကွင်းတစ်ခုမှတင်းနစ်ကွင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်. မင်းယုံရခက်ရင်မင်းကိုယ်တိုင်လာကြည့်, ဤတင်းနစ်ကလပ်သည်လူတိုင်းအတွက်ဖွင့်သည်.
လူတိုင်းကပါရီကိုလာဖို့အိပ်မက်မက်ကတည်းက, များစွာသောသူတို့သည်ပါရီသို့သွားရန်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့ရန်သူတို့၏တစ်သက်တာအိပ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်, မြို့သည်အလွန်စည်ကားသည်. ထို့ကြောင့်ပါရီရှိအထင်ရှားဆုံးအဆောက်အအုံအချို့သည်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်သွားသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ. ဒါကတင်းနစ်ကွင်းတွေမှာလည်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ကိစ္စပါ, နိုင်ငံအတော်များများမှာဒါတွေကပြင်ပနယ်ပယ်တွေပဲ, ပဲရစ်, မင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ် ဘူတာရုံတစ်ခု၏ထိပ်, Atlantic ဥယျာဉ်တွင်, Tour Montparnasse ၏ရှုခင်းများနှင့်.
7. Pikes Hotel Ibiza ၌တင်းနစ်ကစားပါ
စပိန်ကျွန်းသည်ရိုးသားသောပါတီများကြောင့်ကျော်ကြားသည်, ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ, နှင့်ကမ်းခြေ. Ibiza တွင်အချို့အရာများရှိသည်ကိုသင်သိလျှင်သင်အံ့သြလိမ့်မည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများ စပိန်တွင်. ကျောက်ဆောင်ကျွန်း, ရွှေကမ်းခြေ, သန့်ရှင်းသောပင်လယ်သည်လူတိုင်းကိုတစ်ညလုံးကခုန်ခြင်းကိုမေ့စေသည်. အစား, နေထွက်ကြသည်, Ibiza ၌နောက်ထပ်ကောင်းသောနေ့ကိုကြိုဆိုရန်.
ထို့အပြင်, စပိန်ကျွန်း၏အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်းသည်တက်ကြွသောအားလပ်ရက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်. ဟိုတယ်များသည်ကြီးကျယ်သောအားကစားပစ္စည်းများပေးသည်, ထူးဆန်းသောတင်းနစ်ကွင်းများကဲ့သို့. တစ်ကိုယ်တော်တင်းနစ်ကစားပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများအနက်တစ်ခုမှာ Pikes Hotel ၏ပန်းရောင်တရားရုံးဖြစ်သည်. ဤပျော်စရာတင်းနစ်ကွင်းသည်ပတ်ပတ်လည်ရှိစိမ်းလန်းသောတောင်တန်းများနှင့်အပေါ်မှအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်များနှင့်ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးကကြည့်သည်. တစ် ဦး တည်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်, သို့မဟုတ်နှစ်ဆ, သင်ကတင်းနစ်ဝါသနာပါလျှင်, ထို့နောက် Ibiza ရှိ Pikes သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်.
8. Tenuta Delle Ripalte Elba ကျွန်း, Tuscany
Elba Island ရှိအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများသည်တင်းနစ်ကွင်းမရှိ. Tuscany ရှိ Elba ကျွန်းသည်ပင်လယ်ဘေးတွင်ရှိသည်, စပျစ်ဥယျာဉ်လမ်းကြောင်းများနှင့်အီတလီအိမ်ကြီးများ, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးယဉ်သလိုပဲ. Elba ကျွန်းသည်ဥရောပရှိထိပ်တန်း snorkeling နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်အောက်၌လည်းကောင်း၊ ယခင်၌လည်းကောင်းသင်တို့သဘောတူလိမ့်မည်, အီတလီမှာအကြီးဆုံးကျွန်းစုတွေကိုလေးစားရင်း.
ထိုကွောငျ့, Elba ကျွန်းသည်လှပသောပြင်ပအားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်. ကမ်းခြေမှာပျော်စရာတွေထည့်ပေးတယ်, မင်းကထိပ်တန်းအပန်းဖြေစခန်းတွေထဲကမင်းရဲ့ပါဝါစုံတွဲရဲ့အားသာချက်ကိုမင်းတစ်ယောက်တည်းကစားနိုင်တယ်’ တင်းနစ်ကွင်း. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, Elba ရှိအားလပ်ရက်တိုင်းတွင်သီးသန့်တင်းနစ်ကွင်းများရှိသည်, ရေကူးကန်များ, သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေများ. မင်းကဝင်းထဲကနေပင်လယ်ထဲကိုခြေတစ်လှမ်းနဲ့ခုန်နိုင်တဲ့အခါ, မင်းကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့နေနေတယ်, သေချာသည်.
9. တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းခရီးများ: စကော့တလန်တင်းနစ်အပန်းဖြေခရီး
ရဲတိုက်, တဲအိမ်များ, ကမ်းပါးများနှင့်ကုန်းမြင့်များစကော့တလန်သဘာဝ, စကော့တလန်သို့ခရီးသွားခြင်းသည်သူရဲကောင်းများနှင့်ဒဏ္gendsာရီများခေတ်သို့ပြန်သွားသည်. သက်ငယ်အိမ်များနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောရဲတိုက်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီမထိတွေ့နိုင်ပေ, စိမ်းလန်းသောအပြင်ဘက်တွင်ယနေ့ခရီးသွားများကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံသည်. ရေကူးကန်များမှတင်းနစ်ကွင်းအထိ, အိမ်တိုင်းမှလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုဧည့်သည်များအားပေးနိုင်ရန်အသေးစိတ်အားလုံးကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.
ဒါကြောင့်, သင်တင်းနစ်ကစားပွဲကိုနှစ်သက်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်ခမ်းနားတဲ့ကျေးလက်ရှုခင်းတွေအထိခြေလျင်တက်မယ်, စကော့တလန်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်. စကော့တလန်တွင်အားလပ်ရက်၏အတွေ့အကြုံကိုစကားလုံးများသည်သင်ကိုယ်တိုင်အလှတရားကိုမမြင်မချင်းစကားများလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. သင်ဤကဲ့သို့သဘာဝအလှ၌ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်, သင်အပြင်မှာပျော်စရာနှင့်အပန်းဖြေမှုမိနစ်တိုင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်.
10. တင်းနစ်အားလပ်ရက် Salzkammergut သြစတြီးယား
အိုင်နားမှာမင်းကဗျာရေးနိုင်တယ်, နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်သည်, Strudel နှင့်. သို့သော်ငြားလည်း, Salzburg ရှိဂုဏ်ကျက်သရေရှိသော Lake Wolfgang သို့ Schafberg တောင်ရထားကိုသင်စီးနိုင်သည်. Salzburg ရေကန်ဒေသသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးသဘာဝအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ကန်လေးရယ်, Alpine စားကျက်မြေ, St Gilgen နှင့် St Wolfgang အကြားဘုရားဖူးတောင်တက်လမ်းကြောင်းသည်သင်၏အားသာချက်များကိုပြန်လည်နုပျိုစေမည့်ကြောက်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းများ.
လာရောက်လည်ပတ်သူအများစုသည်အပန်းဖြေရန် Wolfgang Lake သို့လာနေစဉ်, ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. တောင်တက်မှုကြီးမှလွဲ, မင်းလုပ်နိုင်တယ်, သြစတြီးယားဒေသသည်တင်းနစ်ချစ်သူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်. Salzkammergut ရှိဟိုတယ်များသည် alpine နှင့် lake views များဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတင်းနစ်ကွင်းများရှိသည်. ဒါကြောင့်, မင်းရဲ့အိပ်မက်ကသြစတြီးယားမှာတင်းနစ်အားလပ်ရက်ဖြစ်ရင်, Salzkammergut သည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ပျော်စရာကောင်းတဲ့အားလပ်ရက်မှာမင်းကိုကူညီဖို့ငါတို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်. ဤ 10 ထိပ်တန်းနေရာများ၌ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတင်းနစ်ကွင်းများရှိသည်. ဒါကြောင့်, သင်၏တစ်ကိုယ်တော်ကစားနည်း (သို့) သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်သည်, သင်၏လှပသောအားလပ်ရက်တွင်ပျော်စရာအမှတ်တရများဖန်တီးပါ.
ငါတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်အတူထိပ်တန်းခရီးဆုံး ၁၀ နေရာ” ကိုမင်းရဲ့ site မှာထည့်ချင်လား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Trenitalia နှင့်အတူမီလန်သို့ရောမသို့သွားမည်3hours